Amboary ny olana amin'ny Instant Hotspot ao amin'ny iOS 8 sy OS X Yosemite | Vaovao IPhone
iOS 8 sy OS X Yosemite dia nahitana fahombiazana ho an'i Apple tamin'ny fampidirana ny rafitra fikirakirany finday sy solosaina. Ny Continuity sy Handoff dia iray amin'ireo mpandray anjara lehibe, saingy misy ihany koa ny fanatsarana kely izay, raha tsy misy ny revolisionera, dia manamora ny zavatra ho antsika izay manana fitaovana Apple maro. Ny iray amin'izy ireo dia Instant Hotspot, fiasa miaraka amin'izany azonao atao ny mampiasa ny fifandraisana data an'ny iPhone na iPad amin'ny Mac saika ho azy, tsy mila manamboatra na inona na inona. Saingy misy mpampiasa sasany manana olana ary tsy miseho io safidy io, ka manome torohevitra vitsivitsy izahay mba hiasa araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
iPhone - iPhone 5 ary taty aoriana
iPad - iPad 4 ary taty aoriana (mazava ho azy fa ny modely misy fifandraisana 4G ihany)
iPod mikasika - iPod touch 5
iMac - hatramin'ny 2012
MacBook Air - hatramin'ny 2012
MacBook Pro - hatramin'ny 2012
Mac Pro - hatramin'ny 2013
Mac Mini - hatramin'ny 2012
Raha ao amin'ity lisitra ity ny fitaovanao, dia mampiasa kaonty iCloud mitovy amin'ny roa sy ny drafitra datao dia misy Tethering (fizarana internet) dia tokony handeha io safidy Instant Hotspot io. Fa araka ny fantatsika rehetra, ny mandeha ho azy dia tsy tsotra foana. Araho ny dingana eto ambany hahazoana izany:
Tsy maintsy nampavitranao ny Bluetooth sy WiFi amin'ireo fitaovana roa ireo
Atsaharo ny fitaovana roa, indraindray ity dingana tsotra ity dia mamaha ny olana
Ovao ny anaran'ny iPhone na iPad anao. Somary tsy mitombina koa nefa mandeha. Mandehana any amin'ny setting> General> Information> anarana ary ovao ny anaran'ny fitaovanao.
Avereno ny toe-javatra misy ny tamba-jotra. Mandehana any amin'ny Settings> General> Reset> Reset Network setting. Ataovy ao an-tsaina fa ity dingana ity dia hamafa ny lakile rehetra amin'ny tambajotra Wi-Fi izay notehirizinao tao amin'ny keychain iCloud.
Nahavita namaha ny olanao tamin'ireto dingana ireto ve ianao? Mahafantatra dingana hafa hahatratrarana azy ve ianao? Lazao aminay ireo hevitra fa azo antoka fa ho hitan'ny mpamaky fa mahasoa ny zavatra niainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Amboary ny olana amin'ny Instant Hotspot ao amin'ny iOS 8 sy OS X Yosemite